खुसिको खबर : काठमाडौंमा अब बारअनुसार पसल खोल्न पाइने, कुन दिन कुन पसल खुल्छन्? – Khula kura
खुसिको खबर : काठमाडौंमा अब बारअनुसार पसल खोल्न पाइने, कुन दिन कुन पसल खुल्छन्?
निषेधाज्ञा अवधिमा थप केही क्षेत्र खुकुलो तुल्याइएको छ । थप गरिएको निषेधाज्ञा असार १४ गते मध्यरातसम्म लागु हुनेछ । काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा भाइरस संक्रमण उल्लेखनीयरुपमा नघटेको निष्कर्ष निकाल्दै जारी निषेधाज्ञालाई थप गरिएको छ ।
यस्तै काठमाडौं उपत्यकामा निजी सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरिएको छ । आइतबार उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले असार ८ गतेबाट लागु हुनेगरी जोर बिजोर प्रणाली लागु गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
संक्रमण दर घट्दै गएपनि जोखिम भने कायमै रहेकाले निषेधाज्ञा थप गर्ने निर्णय गरिएको हो ।
थपिएको निषेधाज्ञा अवधिमा थप केही क्षेत्र खुकुलो तुल्याइएको छ । अहिलेको निषेधाज्ञा असार ७ गते मध्यरातसम्म कायमै छ । निजी सवारीलाई जोर(बिजोरअनुसार चल्न दिइने ललितपुरका प्रजिअ ढुण्डीप्रसाद निरौलाले जानकारी दिए। यस बारे थप जानकारी केही बेरमा आउने छ ।
कास्कीमा थपियो निषेधाज्ञा : (के गर्न पाइन्छ/पाइदैन हेर्नुस्)